Uchishandisa Outlook Kupatsanura Huru PST Faira mune Diki Mafaira - Iyo Nhanho-nhanho Nongedzo
musha Products DataNumen Outlook Repair Uchishandisa Outlook Kupatsanura Huru PST Faira mune Diki Diki
Uchishandisa Outlook Kupatsanura Huru PST Faira mune Diki Diki
Kubva Outlook 2003, zvinokwanisika kubata akawanda PST mafaera kuruboshwe kuruboshwe pane iyo Outlook, saka unogona kushandisa Outlook kupatsanura hombe PST faira mune akati wandei madiki madiki, seinotevera:
Chekutanga pane zvese, gadzira backup yako yekutanga PST faira kuitira kuchengetedza.
Ipapo iwe unofanirwa kuziva saizi yeiyo hombe PST faira uye fungidzira huwandu hwemafaira akapatsanurwa iwe aunoda kugadzira kuti igone zvirimo mune hombe PST faira.
Ita shuwa kuti yepakutanga hombe PST faira yakavhurwa uye inowanika muboshwe kuruboshwe.
Gadzira akati wandei asina chinhu mafaera ePST semafaira akapatsanurwa. Aya mafaera anofanirwawo kuve anowanikwa mune yekuruboshwe yekufamba panhare.
Fungidzira batch yezvinhu iwe zvaunoda kuisa mune yekutanga kupatsanura faira, wobva wasarudza ivo muhombe PST faira, wobva waendesa kune yekutanga split faira.
Tarisa saizi yekutanga kupatsanura faira. Kana saizi yayo iri OK, ipapo iwe unogona kuenderera neinotevera split faira, zvikasadaro, ungangoda kufambisa zvimwe zvinhu kubva kune hombe PST faira kune yekutanga split faira zvakare.
Dzokorora nhanho yechinomwe kudzamara saizi yekutanga kupatsanura faira yasvika pasayizi inotarisirwa.
Ipapo iwe wapedza yekutanga kupatsanura faira uye unofanirwa kuenda kune inotevera.
Dzokorora nhanho 6 kusvika 9 kusvika zvinhu zvese zviri muhombe PST faira zvaendeswa kumafaira akapatsanurwa.
Pane zvimwe zvinokuvadza mukushandisa Outlook kupatsanura hombe PST faira:
Outlook 2003 kana yepamusoro shanduro dzinotsigira kuzviita. YeOptlook 2002 kana yakaderera vhezheni, sezvo mushandisi asingakwanise kuwana zvirimo mukati akati wandei PST mafaera panguva imwe chete, haugone kupatsanura neiri pamusoro maitiro.
Iwe unofanirwa kukwanisa kuwana zvirimo mune hombe PST faira kubva kuAptlook. Kana yako PST faira yakaora kana isingakwanise kuvhurwa nekuda kweiyo 2GB dambudziko rakakura, saka haugone kushandisa nzira iri pamusoro.
Izvo zvishoma zvakaoma kudzora saizi yekuparadzanisa PST faira. Iwe unofanirwa kuedza kakawanda kudzamara zvazadzisa zvaunoda.
ne DataNumen Outlook Repair, iwe unogona kutsemura iyo hombe PST faira kuita zvidiki zvoga otomatiki, pasina kunetseka nezve zvese zviri pamusoro zvakashata.